म्यानपावरलाई बुझाएको पैसा फिर्ता पाउँछु ?
Fri, Aug 07, 2020 | 00:21:08 NST
प्रश्न : मेरो मलेसियाका लागि भिसा आएको थियो । तर म आफ्नै कारणले मलेसिया जान सकिन । मैले म्यानपावरलाई १० हजार रुपैयाँ बुझाएको थिएँ त्यो पैसा फिर्ता पाउँछु कि पाउँदिन ?
उत्तर : राजेन्द्र भण्डारी, सचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संध – द"तावासले पासपोर्ट स्ट्याम्प लगाइसकेको छ भने म्यानपावरले द"तावासलाई भिसा क्यान्सलेसन वापत रु ३ हजार ९ सय तिर्नु पर्छ । श्रम स्वीकृती र अभिमुखिकरण तालीममा रु ५ हजार लाग्छ । म्यानपावरले आफ्नो खर्च भर्पाइको लागि उक्त रकम नफर्काउन पनी सक्छ ।